बहसमा मृत्युदण्ड : आवश्यकता कि बाध्यता ? (वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँगको कुराकानी) | Nepali Radio Network radionrn.com बहसमा मृत्युदण्ड : आवश्यकता कि बाध्यता ? (वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँगको कुराकानी) | Nepali Radio Network
बहसमा मृत्युदण्ड : आवश्यकता कि बाध्यता ? (वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँगको कुराकानी)
१३ श्रावण २०७५, आईतवार १९:३०
दिनेश न्यौपाने, काठमाडाैं । मुलुकमा पछिल्लो समय भैरहेका बलत्कारका घटनालाई लिएर न्युनिकरणका लागी चर्को बहस भैरहेको छ । आम नागरिक देखि सडक र सदनसम्म बलत्कारका घटनाका बिषयमा बुलन्द आवाज उठिरहेका छन् ।
संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षदल काँग्रेसले त बलत्कारका घटनालाई निरुपण गर्न कानुन सम्सोधन गरि मृत्यु दण्डसम्मको माग गरेको छ । नेपालको संबिधानमा भने कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिइने गरि कानुन बनाइने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
के प्रतिपक्षले भनेझै कानुन संसोधन गरेर नेपालमा बलत्कारका दोषीलाई मृत्यु दण्ड दिने गरि कानुन बनाउन सम्भव छ त ? नेपालमा पछिल्लो केही बर्ष यता बलत्कारका घटनामा बृद्धी हुदै गएको छ । फितलो कानुनी राज्य, प्रभावकारी अनुसंधान नहुँदा बलात्कारका घटनामा बृद्धी भएको जानकार बताउछन् ।
बृद्धादेखी बालिकासम्म बलत्कारको सिकार हुने गरेका खबरहरु दैनिकजसो सार्वजनिक हुने गरेका छन् । नेपाल प्रहरीका अनुसार पछिल्लो एक दशक यता बर्षेनी बलत्कारका घटनामा बृद्धी हुदै गएको प्रहरी प्रवक्ता शैलेस थापा बताउछन् ।
पछिल्लो समय कञ्चनपुरको भिमदत्त नगरपालिका वाड न २ की १३ बर्षिया बालिकाको बलात्कार पछी हत्या भएको घटनाको सडकदेखि संसदसम्म बिरोध भएको छ ।
बलात्कारजस्तो अपराधमा नयाँ कानून बनाएरै भएपनि कडाभन्दा कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद उमा रेग्मीले प्रतिधिसभाको आजको बैठकमा बलत्कारीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।
नेपालको संबिधानको धाराको १६ को उपधारा २ मा भनिएको छ कसैलाई पनी मृत्युदण्डको सजाए दिने गरी कानुन बनाइने छैन् । दिनहुँ बलत्कारका घटना हुन थालेपछी निराकरण लागी फाँसीको सजाय हुनु पर्ने माग नागरिकस्तरबाट उठे पनि त्यस्तो संवैधानिक व्यवस्था भने हामी कँहा छैन ।
नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक संबिधान भएको मुलुकमा मृत्युदण्डको सजाए गैरसंबैधानिक हुने कानुनका ज्ञाताहरु बताउछन् । बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन् मृत्यु दण्डको सजाए भएका मुलुकहरुमा पनि अपराधमा भने कमी आएको छैन् ।
संसारका धेरैजसो तोकतान्त्रीक संबिधान भएका मुलुकले मृत्यु दण्डको सजायलाई उन्मुलन गर्दै गैरहेका छन् । दण्ड मात्रै समस्याको समाधान भने पक्कै होइन । तर अपराध न्यूनीकरणमा यसको भूमिका नरहने पनि होइन ।
त्यअर्थ अपराधीलाई अपराध अनुसारको कडाभन्दा कडा सजाएको सुनिश्चितता गरी कानूनी राज्यलाई बलियो बनाउ सके यस्ता घटनामा कमी आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी संग नेपाली रेडियो नेटवर्कका लागी दिनेश न्यौपानेले गरेकोे कुराकानी सुन्नुहोस
विपक्षी दल, पत्रकार र मानवअधिकारकर्मीहरु आन्दोलित
ओली र दाहाल सम्बन्ध सुमधुर बनाउने प्रयासमा, दुवैजनाद्वारा एकसाथ सरकारको बचाउ
फेब्ब्रवरी महिनालाई आयोडिन महिनाका रुपमा मनाइदै , स्वास्थ्य जिवनका लागि आयोडिन अति आवश्यक
यौन दुर्व्यवहार बाट बच्न आत्मरक्षा सम्बन्धी विधिहरुको प्रयोग र महत्व बढ्दै
विश्वमा लोकतन्त्रको यस्तो छ अवस्था
मध्यान्ह १२ बजेको नेपाली खबर
पाँचथर हत्या घटनापछि युवकले आत्महत्या गरेकोे स्थान नजिकै रगत लतपतिएको खुकुरी भेटियो
सरकार द्वारा अठचालीस मेनपावरको अनलाइन कारोवार बन्द
मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे नेकपाका नेताकै आपत्ति, सच्याउनु पर्ने भनेपछि सरकार अप्ठ्यारोमा
अवैध रुपमा लिबिया र्पुयाइएका १५ नेपालीको उद्धार, नेपाल फिर्तीको तयारी हुँदै
६ जेष्ठ २०७६, सोमबार १५:३०
प्रतिनिधिसभामा बिभिन्न ५ वटा प्रतिवेदन र ८ वटा विधेयक प्रस्तुत
६ जेष्ठ २०७६, सोमबार १५:२७
हास्यकलाकार मनोज गजुरेल पूर्वका विभिन्न कारागारमा !
६ जेष्ठ २०७६, सोमबार १५:०२
जम्मा दश पैसामा फोन गर्न सकिने: नेपाल टेलिकमको अफर
६ जेष्ठ २०७६, सोमबार १४:४९
बजारमा आयो : “लाजमर्दो बनाई छाट्यौ नेपाली हौ भन्न” (भिडीयो सहित)
६ जेष्ठ २०७६, सोमबार ०९:४२
संघीय संसद अन्तर्गतका दुवै सदनको बैठक आज बस्ने, विभिन्न विधेयकहरु पेश हुने
६ जेष्ठ २०७६, सोमबार ०८:४१
६ जेष्ठ २०७६, सोमबार ०८:२९
ट्रकले ठक्कर दिँदा चितवनमा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु
६ जेष्ठ २०७६, सोमबार ०८:१५